Rainbow moonstone midika hoe fananana sy fanasitranana - horonan-tsary
Serivisy fitiliana vato an-tserasera
Inona no vatosoa sarobidy sarobidy sy halimo?
Ahoana no hanombanana ny sandan'ny vato?
Tena miasa ve ny kristaly manasitrana?
Moa ve ny vatohara mineraly?
Inona avy ireo fotodrafitrasan'ny taratra optique?
Ahoana no tsy hanjavonana amin'ny fividianana vato?
Inona no atao hoe mpihinana kavina?
Inona avy ireo vatosoa?
Inona no dikan'ny firavaka platinum ao Kambodza?
What engagement ring?
Inona no atao hoe Siem Reap?
Tags Moonstone, avana, Rainbow; moonstone
Rainbow moonstone dia dikany sy fananana manasitrana. Vidiny moonstone mamirapiratra manga
Vidio ny tsangambato voajanahary voajanahary ao amin'ny magazay
Vanavaravarana avanavaravarana volafotsy
Moonstone dia orthoclase feldspar. Izy io dia manana ny akora simika an'ny KAlSi3O8 (potasioma, aliminioma, silikone, oksizenina). Moonstone dia hita amin'ny loko isan-karazany ao anatin'izany ny fotsy, krema, volondavenona, volafotsy, paiso, mainty. Na dia mampiseho adularescence aza izy ireo, dia tsy flash mareva-doko toa anao ho hitanao amin'ny tsindrona volomborona.
Rainbow moonstone dia plagioclase feldspar. Izy io dia manana ny akora simika an'ny (Na, Ca) Al1-2Si3-2O8 (sodium, calcium, aluminium, silicon, oxygen). Io dia singa simika mitovy amin'ny labradorite. Na eo aza ny anarana moonstone, tena labradorite fotsy izy io. Izany no mahatonga ity vato ity hanana fisehoan-javatra labradorescence hitantsika ao amin'ny labradorite. Matetika izy io dia misy fampidirana tourmaline mainty.
Toy ny vatosoa feldspar hafa toy ny amazonite sy labradorite, dia mora tohina amin'ny zavatra simika, abrasives, hafanana, asidra ary amoniaka. Aza mampiasa etona, rano mafana na mpanadio ultrasonic amin'ity vatosoa ity. Mampiasà savony malefaka sy rano fisaka amin'ny hafanan'ny efitrano misy lamba malefaka hitazomana ny famirapiratan'ny vatosoa.
Ny fametrahana dia hita any Canada, Australia, India, Madagascar, Mexico, Myanmar, Russia, Sri Lanka ary Etazonia.
Rainbow moonstone dia dikany sy fananana manasitrana
Ity fizarana manaraka ity dia siansa pseudo ary mifototra amin'ny zavatra ara-kolontsaina.
Ny vatosoa dia heverina fa hitondra fifandanjana, firindrana ary fanantenana sady manatsara ny famoronana, fangorahana, fiaretana ary fahatokisana anaty. Inoana fa manampy amin'ny fanamafisana ny fiheverana sy ny fahatsapana ara-tsaina, indrindra ny fanomezana fahitana ho antsika zavatra izay tsy miharihary eo noho eo. Satria manampy antsika hisoroka ny fahitana tonelina izany dia afaka mahita zavatra hafa azo atao isika. Toy ny tselatra aingam-panahy izay tonga rehefa misokatra sy mangina isika. Rehefa mitafy io vato io isika dia afaka mitranga matetika hatrany ny aingam-panahy manova fiainana.
Inona no ilana avana avana?
Ny vato dia heverina fa hitondra fifandanjana, firindrana ary fanantenana sady manatsara ny famoronana, fangorahana, fiaretana ary fahatokisana anaty. Inoana fa manampy amin'ny fanamafisana ny fiheverana sy ny fahatsapana ara-tsaina, indrindra ny fanomezana fahitana ho antsika zavatra izay tsy miharihary eo noho eo.
Ahoana no hikarakaranao ny avana avana?
Toy ny ankamaroan'ny vatosoa, ny vato volana dia marefo ary tokony hokarakaraina am-pitandremana. Hanadio, mampiasa rano mafana tsotra fotsiny miaraka amin'ny savony malefaka hanadiovana. Azonao atao koa ny mampiasa borosy borosy malefaka raha ilaina. Avy eo, maina fotsiny amin'ny lamba malefaka
Rantsan-tànana inona no anaovanao peratra volom-borona avana?
Mba ahazoana tombony be indrindra amin'ity vato ity, ny fanaovana azy amin'ny peratra volafotsy sterling no fomba tsara indrindra. Na ny fanandroana aza dia mamporisika ny moonstone hatao tsara amin'ny rantsantanana kelin'ny tanana ankavanana.
Ahoana no ahalalanao raha tena misy fehilana avana?
Ny vato dia azo fantarina amin'ny alalàn'ny toetrany mahazatra, izay miseho ho loharanom-pahazavana ao anaty na fahazavana. Izy io dia afaka manavaka azy amin'ny moonstone orthoclase amin'ny alàlan'ny index bias avo lenta sy ny hery misintona manokana avo kokoa.
Voajanahary ve ny tsangambato avana?
Eny labradorite tsy misy loko izy io, mineraly feldspar mifamatotra akaiky misy loko mamirapiratra amin'ny loko maroloko. Na dia ara-teknika aza izy tsy moonstone, dia nitovy ny faneken'ny varotra azy ho vatosoa ho azy manokana.
Hatraiza ny hamafin 'ny avana avana?
Manana hamafin'ny 6 ka hatramin'ny 6.5 izy io, izay mety toa malefaka ihany raha ampitahaina amin'ny vato sarobidy, saingy sarotra ny mitafy.
Inona ny vidin'ny avana manga?
Ireo fitaovana translucent, na fotsy na misy loko mahafinaritra sy mahaliana amin'ny vatana, dia mahazatra eny an-tsena ary manome vidiny maotina.
Volana kintana mainty
Tags mainty, Kintana mainty, Moonstone, kintana
Tags Feldspar, Moonstone
Volana kintana amin'ny mason'ny saka
Tags Cat's eye, Moonstone
Maimaim-poana ny fandefasana
Fandefasana entana maimaim-poana ho an'ny baiko rehetra farafaharatsiny $ 50.00 ao amin'ny fivarotanay
Home | Birthstones | Mifandraisa aminay
fahadisoana: Content dia voaaro !!